အင်္ဂလန်အသင်းကို ကြောက်ရွံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ရှက်ဗ်ချန်ကို – Sports A2Z
အင်္ဂလန်အသင်းကို ကြောက်ရွံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ရှက်ဗ်ချန်ကို
by Sports A2Z
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ အတွင်း စွမ်းဆောင်မှုတွေက ယူကရိန်းအသင်းအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုး လုံးဝမရှိဘူးလို့ နည်းပြ အန်ဒရီ ရှက်ဗ်ချန်ကိုက ယူဆထားပါတယ်။ သူတို့က အင်္ဂလန်ကို ကြောက်ရွံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆွီဒင်အသင်းကို အချိန်ပိုမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးက နောက်ကျဂိုးတွေကို အားကိုးခဲ့ရပြီး အနိုင်ရတာ သေချာစေခဲ့တာဖြစ်လို့ သူတို့တွေ့ဆုံမှုမှာ လောင်းကြေးထပ်စရာ ပုံအောနေတာပါ။
အချိန်ပို မိနစ် ၃၀ ရဲ့ နာကျင်အချိန်ပိုမှာ သွင်းခဲ့တဲ့ အာသန် ဒိုးဗစ်ခ် ရဲ့သွင်းဂိုးကြောင့် တစ်ယောက်လျော့ ဆွီဒင်ကို နှစ်ဂိုး – တစ်ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့အနိုင်ရလဒ်ကြောင့် ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်ခဲ့သလို ရှက်ဗ်ချန်ကိုလည်း အနိုင်ဂိုးရတာနဲ့ ကွင်းဘေးစည်းမှာ အောင်ပွဲခံနေခဲ့တာပါ။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ အိုလစ်ခ်ဇန်ဒါ ဇင်ချန်ကို က ယူကရိန်းအသင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယူရို ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်စေတဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ပြီး အနိုင်ဂိုးကိုလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။
နာရီအနည်းငယ်အစောပိုင်းက အင်္ဂလန်က သမိုင်းဝင်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ရခဲ့ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရာဟီးမ်စတာလင် နဲ့ ဟာရီကိန်းတို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ ပရိသတ် လေးသောင်းကျော်ရှေ့မှာ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အဓိကပြိုင်ပွဲအတွင်း ဂျာမနီကို အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူရို ၂၀၂၀ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာတော့ ယူကရိန်းနဲ့ တွေ့ဆုံနေတာပါ။
အဲ့ပွဲကိုတော့ ရိုးမားအသင်းရဲ့ ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီး ရှက်ဗ်ချန်ကို‌ကတော့ အေစီမီလန် ကစားသမားဘဝမှာကတည်းက အသားကျနေတဲ့ကွင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ သူက “သူတို့ကို ဂိုးသွင်းဖို့ခက်ပေမယ့် ကြောက်ရွံ့နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ဘောလုံးမှာ မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုပြီး ပြထားကြတော့ အားတက်စေတယ်ဗျ” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက “ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်မှုပေးချင်လို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ အင်္ဂလန်က အသင်းကောင်းတစ်သင်းပါ။ တောင့်တင်းတဲ့ အရန်အင်အားလည်းရှိတယ်။ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေမှာ လူတော်တွေရှိတယ်။ ဒီပွဲက အင်မတန်ခက်ခဲမှာ‌ဖြစ်လို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်ရင် သတိကြီးကြီးထားရမယ်” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ယူရို ၂၀၂၀ မှာတော့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်က ကွာတားဖိုင်နယ်ရောက်ရလောက်အောင်အထိ ကောင်းလှတယ်လည်းမဟုတ်ပေမယ့် ယူကရိန်းအနေနဲ့ ဂါရက်သ် ဆောက်ဂိတ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဧရာမခံစစ်ကြောင်းကိုတော့ ချိုးဖျက်ဖို့ ခက်ခဲနေမှာပါ။ ယူရို ၂၀၂၀ က ပွဲစဉ်‌တွေ အပါအဝင် လက်ရှိအထိ ၆ ပွဲဆက်တိုက် ပေးဂိုးမရှိတဲ့ ခံစစ်ကြောင်းကတော့ ပုံစံကောင်းပြသနေတာပါ။
ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ဆောက်ဂိတ်က “ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တကယ်တော့ ပြောစရာတောင်မလို‌ပေမယ့် အဝတ်လဲခန်းထဲမှာကတည်းက တစ်သင်းလုံးက စနေည ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအကြောင်း ပြောနေကြပြီဗျ။ ဂျာမနီအသင်းကို တကယ့် စွမ်းဆောင်မှုအကြီးစားနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့ကြတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက “ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သာအောင်အရင်လုပ်ရမယ်ဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲက တကယ် အန္တရာယ်ရှိခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အဲ့ပွဲမှာကတည်းက တကယ့်စိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဗျ။ ကစားသမားတွေလည်း မြင့်မားတဲ့အဆင့်တွေ ရောက်ဖူးတော့ ဒါဘယ်လောက်ခက်လဲသိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်သေးပါဘူး”လို့ ပြောခဲ့ပြီး သူ့ကစားသမားတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ တူညီတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းဖို့ အကြောင်းကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးတို့ရော…အင်္ဂလန်အသင်း ဘယ်အထိရောက်မယ်လို့ထင်လဲ??? မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးသွားကြပါဦး…
အဂၤလန္အသင္းရဲ႕ ယူ႐ို ၂၀၂၀ အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြက ယူကရိန္းအသင္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳး လုံးဝမရွိဘူးလို႔ နည္းျပ အန္ဒရီ ရွက္ဗ္ခ်န္ကိုက ယူဆထားပါတယ္။ သူတို႔က အဂၤလန္ကို ေၾကာက္႐ြံေနမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆြီဒင္အသင္းကို အခ်ိန္ပိုမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲအၿပီးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္သင္းစလုံးက ေနာက္က်ဂိုးေတြကို အားကိုးခဲ့ရၿပီး အႏိုင္ရတာ ေသခ်ာေစခဲ့တာျဖစ္လို႔ သူတို႔ေတြ႕ဆုံမႈမွာ ေလာင္းေၾကးထပ္စရာ ပုံေအာေနတာပါ။
အခ်ိန္ပို မိနစ္ ၃၀ ရဲ႕ နာက်င္အခ်ိန္ပိုမွာ သြင္းခဲ့တဲ့ အာသန္ ဒိုးဗစ္ခ္ ရဲ႕သြင္းဂိုးေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ ဆြီဒင္ကို ႏွစ္ဂိုး – တစ္ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲ့အႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ ယူ႐ို ၂၀၂၀ ရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့သလို ရွက္ဗ္ခ်န္ကိုလည္း အႏိုင္ဂိုးရတာနဲ႔ ကြင္းေဘးစည္းမွာ ေအာင္ပြဲခံေနခဲ့တာပါ။ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ အိုလစ္ခ္ဇန္ဒါ ဇင္ခ်န္ကို က ယူကရိန္းအသင္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ယူ႐ို ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ေစတဲ့ ဦးေဆာင္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ၿပီး အႏိုင္ဂိုးကိုလည္း ဖန္တီးေပးခဲ့တာပါ။
နာရီအနည္းငယ္အေစာပိုင္းက အဂၤလန္က သမိုင္းဝင္ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲ ရခဲ့ၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရာဟီးမ္စတာလင္ နဲ႔ ဟာရီကိန္းတို႔ရဲ႕ ဂိုးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ေရွ႕မွာ ၁၉၆၆ ကမာၻ႔ဖလားေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး အဓိကၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဂ်ာမနီကို အႏိုင္ရခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယူ႐ို ၂၀၂၀ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ ယူကရိန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေနတာပါ။
အဲ့ပြဲကိုေတာ့ ရိုးမားအသင္းရဲ႔ ကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ၿပီး ရွက္ဗ္ခ်န္ကို‌ကေတာ့ ေအစီမီလန္ ကစားသမားဘဝမွာကတည္းက အသားက်ေနတဲ့ကြင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ သူက “သူတို႔ကို ဂိုးသြင္းဖို႔ခက္ေပမယ့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဘာလုံးမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာမရွိဘူးဆိုၿပီး ျပထားၾကေတာ့ အားတက္ေစတယ္ဗ်” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပးခ်င္လို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဖို႔ကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ အဂၤလန္က အသင္းေကာင္းတစ္သင္းပါ။ ေတာင့္တင္းတဲ့ အရန္အင္အားလည္းရွိတယ္။ နည္းျပအဖြဲ႕ဝင္ေတြမွာ လူေတာ္ေတြရွိတယ္။ ဒီပြဲက အင္မတန္ခက္ခဲမွာ‌ျဖစ္လို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ခ်င္ရင္ သတိႀကီးႀကီးထားရမယ္” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
ယူ႐ို ၂၀၂၀ မွာေတာ့ အဂၤလန္အသင္းရဲ႕တိုက္စစ္က ကြာတားဖိုင္နယ္ေရာက္ရေလာက္ေအာင္အထိ ေကာင္းလွတယ္လည္းမဟုတ္ေပမယ့္ ယူကရိန္းအေနနဲ႔ ဂါရက္သ္ ေဆာက္ဂိတ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဧရာမခံစစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔ ခက္ခဲေနမွာပါ။ ယူ႐ို ၂၀၂၀ က ပြဲစဥ္‌ေတြ အပါအဝင္ လက္ရွိအထိ ၆ ပြဲဆက္တိုက္ ေပးဂိုးမရွိတဲ့ ခံစစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ပုံစံေကာင္းျပသေနတာပါ။
ပြဲႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ေဆာက္ဂိတ္က “ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တကယ္ေတာ့ ေျပာစရာေတာင္မလို‌ေပမယ့္ အဝတ္လဲခန္းထဲမွာကတည္းက တစ္သင္းလုံးက စေနည ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲအေၾကာင္း ေျပာေနၾကၿပီဗ်။ ဂ်ာမနီအသင္းကို တကယ့္ စြမ္းေဆာင္မႈအႀကီးစားနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ပြဲအၿပီးမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခဲ့ၾကတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္သာေအာင္အရင္လုပ္ရမယ္ဗ်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ပြဲက တကယ္ အႏၲရာယ္ရွိခဲ့တဲ့အခိုက္အတန႔္ျဖစ္ခဲ့တာ။ အဲ့ပြဲမွာကတည္းက တကယ့္စိန္ေခၚမႈအႀကီးႀကီးေတြ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာဗ်။ ကစားသမားေတြလည္း ျမင့္မားတဲ့အဆင့္ေတြ ေရာက္ဖူးေတာ့ ဒါဘယ္ေလာက္ခက္လဲသိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ေသးပါဘူး”လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး သူ႔ကစားသမားေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ တူညီတဲ့ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းဖို႔ အေၾကာင္းကို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရာ…အဂၤလန္အသင္း ဘယ္အထိေရာက္မယ္လို႔ထင္လဲ??? မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေပးသြားၾကပါဦး…
July လဆန်း နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများ စုစည်းမှု
1 Jul နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ ဆန်ချိုနှင့် ဆက်စပ်သတင်းများ စုစည်းမှု
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၃ အတွက် ပေါလ် မာဆန်ရဲ့...
အမှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုပြီး အေးရာအေးကြောင်း မနေကြဖို့...
Carabao & FA • Match Report • Premier League
အိမ်ကွင်းမှာ ကြောက်နေတဲ့ အာဆင်နယ်ကို ဆီမီးက...
ရော်နယ်လ်ဒိုကိုမှ လူစားလဲမိလို့ အရန်ခုံထိ...
ဗလာဟိုဗစ်ချ်အတွက် ပေါင် ၅၈ သန်း ကမ်းလှမ်းမှုအပြင် အာသာ...